Warar - Farxad Saanad Ciid ah!
Jimcaha, Febraayo 26, 2021 waa xafladda siraad loogu talagalay dadka Shiinaha oo dhan. Waa iid farxadeed. Gaar ahaan habeenku waa soo jiidasho.
Maalintan, dadku waxay sudhaan laambadda, oo halxiraale ayey hoosta ka dhigaan. Kadib ciyaarta ayaa imaaneysa: mala-awaal halxidhaa!
Qofka qiyaasaya halxiraalaha saxda ah ayaa ku guuleysan doona abaalmarino. Waxay u egtahay ciyaar PK ah oo xiise iyo qosol iyo farxad ka buuxo.
Sidoo kale waxaa jira hawlo taxane ah oo dhaqameed sida daawashada faynuusyada, cunista qashin qubka, iyo dhigida rashka.
Fiidkii, siraaddo ayaa la shidi doonaa. Sameeyaa habeen qurux badan!
Halkan waxaan u rajeyneynaa qof walbaa inuu helo Bandhig Faneedka ugu wanaagsan!
Macluumaad: Waxqabadka iyo taariikhda xafladda siraad:
Siraad Festifaal ayaa la cunaa maalinta 15-aad ee bisha koowaad ee dayaxa. "Yuanxiao" ayaa cunno ahaan looga isticmaali jiray dalkeena mudo dheer. In the Song Dynasty, cunno cusub oo loogu talagalay Bandhigga Iftiinka ayaa caan ku noqday dadka. Cuntadan noocan oo kale ah ayaa markii hore loogu magac daray "Floating Yuanzi" markii dambena "Yuanxiao", ganacsataduna sidoo kale waxay ugu yeedheen "Yuanbao". Dabbaaldegga Iftiinka wuxuu u isticmaalaa sonkorta, ubaxyada, sisinta, beerka, qorfaha, iniinyaha walnut, lowska, jujube paste, iwm. Buuxinta ayaa la sameeyaa waxaana lagu rogaa bur bariis dufan leh. Kubadaha bariiska ee gulufka ah waxaa marka hore laga sameeyaa maqaarro leh bur bur bariis ah. Waxaa lagu sameeyaa walxaha, habka ayaa gebi ahaanba ka duwan. Dabbaaldegga Iftiinka wuxuu noqon karaa hilib ama khudradda, oo leh dhadhammo kala duwan. Waxaa lagu kariyey maraq, qoto dheer la shiilay, oo uumiga lagu kariyey.
Qiyaasta hal-xidhaalaha laambadaha ayaa sidoo kale loo yaqaannaa halxiraalayaal faynuus ah. Waa waxqabad dhaqameed siraad Faneys ah. Xujooyin siraad ah ayaa markii hore laga soo saaray halxidhaalayaasha waxayna asal ahaan ka soo baxeen xilligii Gu'ga iyo Dayrta iyo Dagaallada. Halxidhaalaha ayaa sudhan laambadda si dadku u maleeyaan oo u toogtaan. Waxay ka bilaabatay Boqortooyadii Heesta Koofureed. Koonfurta Song Zhou Mi "Waxyaabihii Hore ee Ku Saabsan Farshaxanka?" Diiwaanka "Deng Pin": "U isticmaal faynuusyo xariir ah si aad u gooyso gabayada, kaftanka, iyo jilayaasha rinjiga, lingo madaxa qarsoon, iyo luuqad duug ah oo Beijing ah, oo ku jeesjeesaya dadka lugaynaya." Dabbaaldegga Saanadda, magaalada imbaraadooriga ah habeenna ma ahayn, Guga Bandhigga Feynuuska Dadka, Dad kala duwan, gabayo, halxiraale, buugaag ayaa ku jira laambadda, oo ka dhex muuqda shumaca, oo ku taxan dariiqa, u oggolaanaysa dadka inay maleeyaan, sidaa darteed waxaa loogu yeeraa "halxiraalayaal siraad"
Waxqabadkani waxaa badanaa loogu talagalay dadka jilicsan. Maaddaama jiirku inta badan cuno xarakooyin waaweyn oo xarkaha ah habeenkii, dadku waxay maqleen haddii ay jiir ku cunaan boorash bariiska maalinta shan iyo tobnaad ee bisha ugu horraysa, ay ka boodi karaan xuubka xarka. Sidaa darteed, dadkani waxay karkariyeen dheri weyn oo ah boorash caato ah maalintii shan iyo tobnaad ee bisha koowaad, waxayna qaarkood ku dabooleen lakab hilib ah. Intii aad erey akhrinaysay, jiirka nacdalay cunida ilmaha xariifka ah si ay u adkaato inuu dhinto.